Usuku Lomhlaba-jikelele Lokuhumusha: ... | Oxford isiZulu Living Dictionaries
Home Explore Usuku Lomhlaba-jikelele Lokuhumusha: Ukuxhumanisa amazwe
Usuku Lomhlaba-jikelele Lokuhumusha: Ukuxhumanisa amazwe
Ngonyaka ka-1994, izilimi eziyi-9 zanikezwa ilungelo elifanayo nelesiBhunu nesiNgisi kodwa isimo lezi zilimi zomdabu esizithola zikuso zisaqhubeka nokulandela isiBhunu nesiNgisi ngemuva emikhakheni eminingi emphakathini. Ulimi lwesiBhunu nolwesiNgisi zisaqhubeka nokuhamba phambili cishe kuyo yonke imikhakha okudala ukuthi imiphakathi ezikhulumayo izithole isibuyiselwe eceleni. Nakuba abantu abamnyama baseNingizimu Afrika babevumelekile ukusebenzisa izilimi zomdabu komazibuse ngesikhathi sobandlululo, labo ababezithola benezinkinga zomthetho ikakhulukazi kwakudingeka izinkinga zabo zisonjululwe ngesiBhunu noma ngesiNgisi lokho okwakudala ukuthi bungabi bikho ubulungiswa emphakathini.
Kungalesi sizathu lapho kwamiswa khona Inqubomgomo Kazwelonke Yezilimi ngo-2003 eyayigcizelela ekusetshenzisweni kwezilimi zomdabu ngokulingana nesiBhunu nesiNgisi futhi zibe yizilimi zezwe ezisemthethweni ukuze kukhuthazwe ukuhlangana kwesizwe. Isichazamazwi esiphilayo sesiZulu-ke sona kulokhu sifaka isandla ekuthuthukisweni kwemithombo yolimi lwesiZulu etholakala mahhala emphakathini okhuluma ulimi ukwenzela ukulondoloza lona ulimi esigcinilwazini.
Ngisebenza njengomfundisi eNyuvesi yaseThekwini Yezobuchwepheshe lapho ngifundisa khona isifundo sokuhumusha phakathi kwezinye.
Ngibuye ngisebenze njengomhumushi ngesikhathi sami engxenye kanti futhi ngiwuMphathi Wolimi LwesiZulu wase-Oxford university Press. Emsebenzini engiwenzayo, kuyacaca ukuthi ngiyakuthanda ukuhumusha ngoba kuvala isikhala sokuxhumana komphakathi esasivulwe ukubukelwa phansi kwezilimi zomdabu.